MARA PZL Mil Mi-2 Hoplite FSX & P3D - Rikoooo
downloads 1 507
Lockheed Martin Prepar3D elu tp v5
Ihe Nlere nke Ugbo site n’aka Nemeth. FSX/P3D Ntughari ala site n’aka George Arana / Ugo Rotorcraft Simulations
Ekelere George Arana (Ugo Rotorcraft Simulations) maka ịtọghata ihe mbụ a na-akwụ ụgwọ add-on onye obodo FSX na P3D usoro v4.
Biko rịba ama na helikopta a ga-amalite site na Ọnọdụ Cold & Dark, ọrụ Ctrl + E adịghị arụ ọrụ, ị ga-agụ akwụkwọ ntuziaka ahụ nke ọma n'ihi na ọ dịghị mfe ịmalite ngwa abụọ ahụ. A na-enweta vidiyo nkuzi na ala nke ibe a, mana ọ naghị enyere aka nke ukwuu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịme nkuzi vidiyo anyị nwere mmasị na ya.
Mil Mi-2 (NATO koodu akpọrọ "Hoplite") bụ nke mepụtara na Soviet Union mbụ site n'aka Mil Design Bureau na mbido '60s dịka turbine engine nke nọchiri anya ike nke Mi-1.
Flightgbọ elu ya nke mbụ dị na 1961 ma arụpụta ngwa ahịa ahụ malitere na 1965 site na WSK-Swidnik polish (ugbu a PZL-Swidnick) ma kwụsịrị na 1985. E wuru ihe karịrị 5200 Mi-2s kemgbe 1965 tumadi maka Soviet Union na ndị ọzọ bụbu. Mba Warsaw Pact na ọtụtụ n'ime ha ka ka na-arụ ọrụ. Mi-2 hụrụ ebe ọrụ zuru ebe niile ma ndị agha, ndị steeti na ndị ahịa. Na mgbakwunye na ibufe ibu na ndị njem, Mi-2 achọtala ọrụ dịka ụgbọ ihe mberede, ndị uwe ojii, na helikopta na-achọ na mgbapụta.
a add-on na-anọchite ụdị atọ:
• transportgbọ ndị agha (ndị otu Russian)
• Mfe njem dị mfe (bọọdụ Bekee)
• ụgbọ ihe mberede (Budapest Aircraft Service's HA-BGH - ọgbakọ ndị Hungary)
Zuru ezu ma nwekwaa ụdị nke ime na mpụga
Textures na-atụgharị uche
N'ime ya na ọkụ ya
Ihe ogugu 2D na ihu igwe 3D XNUMXD zuru oke
Akụkụ sere mmiri (ọnụ ụzọ, ndị na-anya ụgbọ elu, ntụgharị, na-egosi omume na VC, wdg)
Eserese eji eme ahia (dika IFR inodu na kotipum mebere)
Ezi ụgbọ elu na-anwale site na ezigbo ndị ọkwọ ụgbọ elu Mi-2
Ọtụtụ sistemụ arụmọrụ nke usoro (ọkụ ọkụ, de-ice, mbelata, eletriki, wdg)
Onye edemede: Ihe Nlere nke Ugbo site n’aka Nemeth. FSX/P3D Ntughari ala site n’aka George Arana / Ugo Rotorcraft Simulations